गर्भवती हुँदा के खाएमा छोरा जन्मन्छ ? र बच्चा गोरो हुन्छ…? जानी राखौ.. – Sandesh Press
August 20, 2021 309
Prevतपाईको हातमा ‘X’ चिन्ह छ ? छ भने यस्तो हुनेछ तपाईको भविष्य ? जान्नुहोस्
ब्वाइफ्रेन्डको खोजीमा छु, ठाँउ खाली छ कोही छ ?’ : सरिश्मा मगर